TTSweet: တီတီဆွိ ရဲ့ NUS နောက်ကြောင်းပြန် ...
Posted by T T Sweet at 9:44 AM
AMK July 1, 2011 at 1:24 PM
ဒီပို့အရမ်းကောင်းတာပဲ မြန်မာတွေသိပ်တော်တယ်နော် Dr.TTsweet ဆက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတီတီဆွီ၇ယ်
သက်ဝေ July 1, 2011 at 4:34 PM
ဖတ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပိုစ့်လေးတခု...
အခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့တော့ အဲဒီတုံးက အခြေအနေတွေနဲ့ တော်တော်လေးကို ကွာသွားပြီနော်... ကျောင်းဆက်တက်ပြီး စာတွေ ကျက်ချင်စိတ်ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို တကယ်ပဲ သဘောကျ ချီးကျူးပါတယ်... ကိုယ်တိုင်ကတော့ ပျင်းသွားတာက တကြောင်း အလုပ်လုပ်လိုက်တာက တကြောင်းတို့ကြောင့် ကျောင်းနဲ့ ဝေးဝေးမှာပဲ နေနေတယ်... ဟိ
sonata-cantata July 1, 2011 at 4:56 PM
နောက်ကြောင်းပြန်လေး ရေးထားတာ ကြိုက်တယ် တီဆွိရေ...
Iora July 1, 2011 at 5:04 PM
YuYa July 1, 2011 at 5:26 PM
Thanks You So Much, Sis.ညီမလည်း လုပ်ဖို့ ကြိုးစား နေ တာ။ အမ ရဲ့စာကို ဖတ် ရ တာ အားတက် လိုက်တာ။ တကယ်. ခွန်အား ပဲ။ ကြိုးစား ပါ့မယ်။
မေဓာဝီ July 1, 2011 at 6:35 PM
ဗဟုသုတလဲရ .. ဖတ်ရတာ ပျော်စရာလဲ ကောင်း၊ အတုယူစရာလဲ ကောင်းတယ် အမရေ ... အမ အရေးကောင်းတော့ ဖတ်လိုက်ရင် ပျော်စရာ ပြုံးစရာလေး ...
အမ post ဖတ်ရင်းနဲ့ NUS life ကိုပြန်သတိရသွားတယ်... အရမ်းအရေးကောင်းတာပဲ
အပြင်မှာ အမနဲ့မ တွေ့ ဖူး လို့blog ပေါ်ကနေပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်မ လဲအမ ရဲ့ solar notes တွေရဖူးတယ် 2004 တုံးကပါ
ဆရာ ကစာသင်ကောင်းတယ်နော် ကျွန်မတို့ တုန်းက ဆရာ့ကို ဗမာ သံ နဲ့ ကရင်ကြီး လို့ခေါ်ကြတယ် :-))
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) July 2, 2011 at 12:27 AM
NUS မှာ မြန်မာတွေတော်တယ် နာမည်ရတယ်ဆိုတာ ဖတ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာနေတာ အောက်ပိုဒ်ရောက်တော့မှ မြန်မာတွေ နာမည်ပျက်သွားတယ် ဆိုတာဖတ်ရပြန်တော့စိတ်ဆင်းရဲမိတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို ကောင်းတာတွေဘဲဖြစ်စေချင်မိတယ်။ မဆွိတီရဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေက ဖတ်ရတာပျော်စရာကောင်းတယ်။
ko9July 2, 2011 at 12:30 AM
မဆွိေ၇ brunei ကလာတက်တဲ့သူ၇ဲ့နံမည်ဘယ်သူလဲဗျ..
Mo July 2, 2011 at 1:47 AM
Thank you very much for your time and sharing the valuable experience. I really appreciate this post and it deserves to wait foralong time :)
According to all the posts I've read, you areagood writer and whatever you do you usually do systematically.
That's why,before reading the post, I'm sure that it will be helpful and informative to the readers.
And also the post encourages me to determine what I should do.
Thanks again and waiting for more new posts :)
Ma TT, May I know your email please?
phyu July 4, 2011 at 1:10 AM
Dear Ma Sweet,
thanks for sharing the valuable experience.
San San Htun July 25, 2011 at 7:24 AM
တီတီဆွိရဲ့NUS အကြောင်းဖတ်ရတော့ ကျောင်းကြီးကို လွမ်းမိပါတယ်။
T T Sweet July 29, 2011 at 10:56 PM
My email account is sweetee2008@gmail.com.